Bafuna ukundlondlobalisa oweziNkondlo | News24
Bafuna ukundlondlobalisa oweziNkondlo
IKWADUKUZA Artist forum nokuyinhlanganisela yamaciko akhele lelidolobha namaphethelo isizibophezele ukufukula nokugqamisa umkhakha wezinkondlo ngenkathi behlangene nezimbongi ngeledlule.
Lelithimba livakashele lapho lezibongi zihlangana khona ngaphansi kwesiqubulo esithi “Poetry Thursday” nebanjelwa ezindlini zoMtapo wolwazi waKwaDukuza. Amaciko angaphansi kwaleNhlanganisela nabeholwa onguSihlalo uMnuz Apologize Bakaza nothe baye lapha ukuyobona umsebenzi omuhle owenziwa ilezimbongi.
“Kahle kahle sifuna ukusiza lendima yezokuHaywa kwezinkondlo ukuba iye phambili futhi indlondlobale, sifuna futhi baziwe njenga maciko njengayo yonke imikhakha esinayo ngaphathi kwe KwaDukuza Artists Forum, bekwazi nokumenyelwa emicimbini emikhulu enzelwa ezinkundleni ezivulekile hhayi emahholo kuphela,” kubeka uBakaza.
Kuloluhambo kube khona ukucobelelana ngolwazi kanye nokugqugquzelana nokukuthazana kwamaciko emikhakha eyahlukene kanti I “Poetry Thursday” yaqala ukuba khona ngonyaka owedlule kanti bahlele ukuba nendumezulu yomcimbi wezinkondlo wokuqala ozobe ubanjelwe ehholo laKwaDukuza mhla zi-28 kuNhlangulana nonyaka.
Abafuna ukwazi kabanzi nge KwaDukuza Artist Forum bengathintana no Mnuz Bakaza ku 0736864025 kanye no Percy the Poet ku 0732716920